online မင်းသား: July 2012
ဘာရယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး..လူရှိန်တာပေါ့နော်..ခိ...အခု online တင်ပေးမဲ့ ဒီဆော့လ်ဝဲလေးက ကိုယ့်ရဲ.
မွေးရက်. မွေးလ. မွေးနှစ် သိပြီး မွေးနေ့ကိုမှ မေ့နေသူများအတွက် ရှာဖွေရတာ အလွန်လွယ်ကူတဲ့ ဆော့လ်ဝဲလေး တခုပါ... မြန်မာလို ရေးထားတာပါ...ကြိုက်မယ်လိုတော့ ထင်ပါတယ်...
လိုချင်သူများအတွက်ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်တာပါ...ဘယ်ဆိုဒ်ကယူလာတာလဲဆိုတာတော့ online မေ့နေပါပြီ..ဘာပဲပြောပြော ဒီဆော့လ်ဝဲလေးကို တင်ထားတဲ့ ဆိုဒ်ပိုင်ရှင်ကို ဒီပို.စ်လေးနဲ.ပဲ ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်းပြောပါရစေ...ဒီဆော့လ်ဝဲလေးက (1900 to 2078)အထိ ကြည့်နိုင်ပါတယ်...
လိုချင်ရင်တော့ ဒီနေရာလေး မှာဒေါင်းလိုက်နော်...
တင်သွင်းသူ online မင်းသား at 00:42 1 comment:
online တို.အခုခေတ်မှာ အင်္ဂလိပ်စာဟာ အရမ်းအသုံးဝင်တဲ့ ဘာသာစကားတစ်ခုနော်...ဘယ်နေရမှာပဲ
ဖြစ်ဖြစ် အင်္ဂလိပ်စကားနဲ.ဆိုရင် လူဝင်ဆံတယ်ပြောရမယ်...တခြားဘာသာစကားတွေ မပြောတတ်ရင်နေပါ...အင်္ဂလိပ်စကားသာ ပြောတတ်ရင် ကမ္ဘာပတ်လို.ရပါတယ်...ဒါပေမဲ့ အဲလိုပြောဆိုဖို.
ဆိုတာ အသံထွက်မှန်ကန်ဖို.က အရေးကြီးပါတယ်...အဲဒါကြောင့် online ဒီဆော့လ်ဝဲလေးကို တင်ပေးလိုက်တာပါ...ဆော့ဝဲလ်လေးကအင်္ဂလိပ်အသံထွက်တွေကိုပီပြင်စွာရွတ်ဆိုပေးတဲ့ဆော့လ်ဝဲလေးတစ်ခုပါ..
မိမိသိချင်တဲ့အသံထွက်တွေကို ကွက်လက်ထဲတွင် ရိုက်ထည့် ဒါမှမဟုတ် Copy ကူးထည့်ပြီး စကားပြောကို နားထောင်လို.ရပါတယ်.. လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီနေရာမှာ ဒေါင်းလုပ်ယူပါ....
တင်သွင်းသူ online မင်းသား at 20:11 No comments:
လောကကြီးမှာ လူတူမရှား နာမည်တူမရှားဆိုတာ သူငယ်ချင်းတို.ကြားဖူးကြမှာပါ...
တွေ.လဲတွေ.ဖူးချင်ကြမှာပေါ့နော်...တကယ်လို. တွေ.သွားရင်လဲ ဟာ..တွေ၊ ဟင်....တွေဖြစ်သွားလောက်ရအောင်ကို အံသြကြရမှာပါ...ဘာလို.လဲဆိုတော့ ကိုယ်နဲ.တော်တော်တူနေလို.ပါပဲ....ကဲ..အခု online ပေးတဲ့
first name နဲ့ last name ရိုက်ထည့်ပြီး citizen box မှာselect country
လုပ်လိုက်ယုံပါဘဲ... ပြီးရင် search database ကိုနှိပ်လိုက်ရင်..ကိုယ်နဲ့နာမည်တူ...ရုပ်ချင်းတူတဲ့ သူရဲ့မှတ်ပုံတင်ကဒ်နဲ့အတူပုံကိုတွေ့ရမှာပါ...ကိုယ်နဲ့ နာမည် တူယုံတင် ဘယ်ဟုတ်မလဲ မသိရင်အမွှာလို့ တောင်ထင်မှတ်ရပါတယ်...ရှာကြည့်လိုက်နော် ....ကိုယ်နဲ.တူတဲ့သူကို တွေ့ ရတယ်ဆို တာ ရှားပါတယ်...ပျော်ရွှင်ကြပါစေ...
တင်သွင်းသူ online မင်းသား at 13:10 No comments:
ဒါလေးကတော့ ကိုယ့်ချစ်သူရဲ.နာမည်ကို လှလှပပလေးရေးချင်သူတွေအတွက်ပါ...ကိုယ်တိုင်ရေးစရာ မလိုပါဘူးနော်...သူ.ဘာသာ သူ auto ရေးပေးသွားလိမ့်မယ်...သိလား....
ပေါ်လာတဲ့ link ထဲက Massage ဆိုတဲ့ box လေးထဲမှာ ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့နာမည်ကို
ရိုက်ထည့်လိုက်ယုံပဲ..ပြီးရင် submit လုပ်လိုက်ပေါ့...ဒါဆိုရပါပြီ....
မှတ်ချက်။ space ခြားချင် ခြားလို့ရပါတယ်... ဒါပေမယ့် အင်္ဂလိပ်လိုတော့
ရိုက်ဖို့လိုပါတယ်...Head Phone လေးတပ်ပြီးနားထောင်ရင်တော့ ပိုကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်...
တင်သွင်းသူ online မင်းသား at 12:58 No comments:
Window7ကို Apple(Mac) ပုံစံလေးပြောင်းမယ်
window7မှာ Mac (apple) ပုံစံလေးပြောင်းပြီး လန်းလန်းလေးနဲ့လုပ်ကြမလား..
ဒီကောင်လေးက Window 7- 32 bit နဲ့ 64 bit မှာ သုံးလို့ရပါတယ်.
အောက်မှာသာ ဒေါင်းပြီး install လုပ်လိုက်ပါတော့..
ကိုယ့် Window က bit ဘယ်လောက်လဲဆိုတာကတော့သိမို့လိုပါမယ်..
မသိရင် Control Panel\_System and Security\_System ကိုသွားပြီးကြည့်လို.ရပါတယ်..
Window7မှာ Android App တွေသုံးကြည့်မယ်
ဒါလေးက အစမ်းလေးပါ..တော်တော်လေးလည်း လန်းတယ်..
Android ကို သုံးကြည့်ချင်နေတဲ့သူတွေ အတွက်တော့ ရှယ်ပဲ.....
window7မှာ Android App လေးတွေသုံးနိုင်အောင် သူက လုပ်ပေးထားပါတယ်...
Android မှာပါတဲ့ Market ကအစအကုန်ပါပါတယ်...
ဒီနေရာလေး မှာဒေါင်းလိုက်ပါ... ပျော်ရွှင်ကြပါစေ...
တင်သွင်းသူ online မင်းသား at 04:50 No comments:
Mouse မသုံးပဲ ကိုယ့်မျက်လုံးလေး သုံးပြီး Mouse pointer ကိုကစားကြည့်ရအောင်
ဒီနည်းလေးကတော့မိုက်တယ်နော်..online တော့မသုံးကြည့်ရသေးဘူး..သူငယ်ချင်းတို. စမ်းကြည့်လိုက်နော်..
ကိုယ့်မျက်လုံးလေး သုံးပြီး Mouse pointer ကိုခိုင်းလို့ ရအောင်လုပ်ကြည့်ကြမယ်.
အဲဒီတော့ ကိုယ့်သုံးမဲ့စက်ကလည်း web cam ရှိဖို့တော့လိုမယ်...
Software လေးကိုတော့ဒီနေရာမှာ ဒေါင်းလိုက်ပါနော်...
Down ပြီးတာနဲ့ install လုပ်လိုက်ပါ..
ပြီးတာနဲ့ Desktop ပေါ်မှာပေါ်လာတဲ့ icon ကို ကလစ် နှစ်ချက်သွားနှိပ်ပါ..
ကိုယ့်စက်ထဲမှာရှိတဲ့ ကင်မရာ အမျိုးအစားကို ရွေးပါ...ပြီးတာနဲ့ နောက်ထပ် ကင်မရာ အကွက်တက်လာပါမယ်..
အဲဒီမှာ မြင်နေရတဲ့ ကိုယ့်မျက်နှာ ပေါ်က မျက်လုံး ကို Mouse နဲ့သွားထောက် ရွေးပြီး ကလစ်နှစ်ချက် နှိပ်လိုက်ပါ.(အစိမ်းရာင်လေးထောင့် သင်္ကေတ လေးနော်.)
မျက်လုံး ကို ဟိုရွှေ့ ဒီရွှေ့လုပ်ပြီး mouse pointer ကစားကြည့်လို့ရပါပြီ....
ကိုယ် ဖွင့်ချင်တဲ့ ဖိုင်ကိုသွားပြီး တခါတည်း ဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Settings ကိုသွားပြင်ပါ.
Settings ကိုနှိပ်လိုက်ပါ..Clicking tab ရဲ့အောက်က Clicking ကို အမှန်ခြစ် ပေးလိုက်ပါ..
ပွင့်လာတဲ့ အထဲက Enable Double Clicking ကိုလည်းအမှန်ခြစ် ပေးလိုက်ပါ..
ကင်မရာ အကွက်မှာ mouse ပုံလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်...အဲ့ဒီ mouse လေးကိုကလစ်တချက်နှိပ်လိုက်ပါ..
Window အားလုံးနဲ့ Linux မှာလည်း သုံးလို့ရပါတယ်....
တင်သွင်းသူ online မင်းသား at 04:18 No comments:
မလိုချင်တဲ့ ဆော့လ်ဝဲတွေကို ကိုယ့်စက်ထဲမှာ install မလုပ်စေချင်ရင်
ဒီတစ်ခါ online က ကိုယ့်စက်ထဲကို ကိုယ် install မလုပ်စေချင်တဲ့ software တွေကို install လုပ်လို့မရအောင်
ဆော့လ်ဝဲလေးကို အောက်မှာ အရင်ဒေါင်းလိုက်ပါ...
ဒေါင်းပြီးရင် ရလာတဲ့ Zip ဖိုင် ကိုဖြေ လိုက်ပါ..
ပြီးရင် Run လိုက်ပါ.. Run တဲ့အခါကျရင် .exe အပေါ် right ကလစ်နှိပ်ပြီး
Run as administrator နဲ့ run ပေးပါ..
Run လိုက်တာနဲ့ Password တောင်းတဲ့ box ကျလာပါလိမ့်မယ်..
OK နှိပ်ပါ..( password မှထည့်စရာမလိုပါဘူး)
နောက်ထပ် ကျလာတဲ့ box တခုထက်ကျလာပါလိမ့်မယ်..
အဲ့ဒီ box ရဲ့ Application Executable Name ဆိုတဲ့ အောက်က အကွက်မှာ မှ
ကိုယ် ပိတ်ချင်တဲ့ Sotware ရဲ့ .exe ကို ရေးထည့်ပါ..ပြီးရင် Block ကိုနှိပ်လိုက်ပါ..
ဥပမာ ကိုယ်က Gtalk ကို Install လုပ်လို့မရအောင် ပိတ်ချင်တယ်ဆိုပါတော့..
googletalk-setup.exe ဆိုတဲ့ gtalk ရဲ့ setup နာမည် ကိုထည့်..ပြီးရင် Block ကိုနှိပ်ပါ..တကယ်လို. သူငယ်ချင်းက .exe နာမည်ကိုမသိဘူးဆိုရင် အဲ့ဒီ .exe ပေါ်ကို Right ကလစ်နှိပ်ပြီး Properties
Setup ဖိုင်ကို ပိတ်လိုက်ပါပြီ..
ပြီးရင် password နဲ့ခံထားဖို့အတွက် Change Password ကိုနှိပ် ကိုယ့်ထည့်ချင်တဲ့ password ကိုထည့်ပါ..ဒါဆို ကိုယ်ပိတ်ထားတဲ့ software ကို ဘယ်သူ့မှ install လုပ်လို့မရတော့ပါဘူး..
တကယ်လို့ ပြန်ဖွင့်ချင်ရင် ပိတ်ထားတဲ့ .exe ဖိုင် ကို select ပေး Unblock ကိုနှိပ်လိုက်ရုံပါပဲ..
တင်သွင်းသူ online မင်းသား at 03:42 No comments:
ဒါလေးကတော့ ဘလော့ခ်ဂါ နေဇော်လင်းရဲ.ပို.စ်လေးပါ..အသုံးဝင်မယ်ထင်လို. ပြန်လည်ကူးယူဝေမျှထားတာပါ...
မိမိသုံးနေသော ကွန်ပျူတာကို ပို၍မြန်ဆန်စွာ အသုံးပြုနိုင်ဖို့ အတွက် နည်းလမ်းတွေ အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ကျွန်တော် လက်တွေ့အသုံးပြု နေတဲ့ နည်းလေးကိုပဲ ပြန်လည် မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
ကဲ .... ပြန်ဖွင့်ပြီး သုံးကြည့် ... ဘယ်လိုလဲ ကွန်ပျူတာလေး မြန်သွားပြီ မဟုတ်လား ... နောက်ဆို တစ်လတစ်ခါ လောက်တော့ ဒီပုံစံအတိုင်း လုပ်ပေးပါနော်။ ဒါဆို ကွန်ပျူတာ သုံးတိုင်း ဖိုင်တွေဖွင့်တိုင်း မြန်မြန်ဆန်ဆန် လေးနဲ့ လန်းလန်းလေး သုံးရပြီပေါ့ဗျာ.........
တင်သွင်းသူ online မင်းသား at 02:20 No comments:
Shutdown,Restart တို့ကို Shortcut တွေအဖြစ် Desktop ပေါ်မှာထားချင်ရင်
online အခုတင်ပေးမဲ့ ဆော့လ်ဝဲလေးက Shutdown /Restart/Log off စတဲ့ ဟာတွေကို
shortcut ပုံစံနဲ.Desktop ကိုတင်ထားလို့ရအောင် Create လုပ်ပေးတဲ့ အရာလေးပါ...
ကိုယ်လိုချင်တဲ့ shortcut ရှိရင် Create ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ရုံပါပဲ..သူ့ဘာသာသူ Auto Desktop ပေါ်ရောက်လာ
နောက်ပြီး Taskbar ပေါ်မှာလည်း Pin လုပ်ပြီးတင် ထားလို့ရပါသေးတယ်...
သူ့ကို လိုချင်ရင်တော့ ဒီနေရာလေးမှာ ဒေါင်းလိုက်နော်....ပျော်ရွှင်ကြပါစေ...
တင်သွင်းသူ online မင်းသား at 01:58 No comments:
Nnotepad ကို ဖန်သားရောင် အကြည်လေးလုပ်ကြည့်ရအောင်
ဒီစော့ဝဲလေးကတော့ ကွန်ပျူတာမှာ ပါရှိတဲ့ Notepad ကို ဖန်သားရောင် အကြည်လေး ဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့ စော့ဝဲလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်....ဒီစော့ဝဲလေးကို အစားသွင်းပြီး အသုံးပြုလိုတဲ့
သူတွေကတော့ Windows မှာ ပါရှိတဲ့ C:\_Windows\_System32 ထဲမှာ ရှိတဲ့ Notepad.exe နေရာတွင် အစားထိုးပြီး အသုံးပြုနိုင်သလို Double Click လုပ်ပြီးတော့ အသင့်သုံးနိုင်တဲ့Portable စော့ဝဲလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်....
Windows မှာပါရှိပြီးသားNotepad.exe ကို ပြန်သုံးချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ အစားမသွင်းခင်
Windows မှာပါရှိတဲ့ Notepad.exe ကို သိမ်းဆည်းထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်...
တင်သွင်းသူ online မင်းသား at 03:44 No comments:
သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ချစ်သူ ကောင်မလေးတို့ဆီကို ရည်းစားစာလှလှလေးတဲ့အခါ စာရွက်လှလှလေးနဲ့ရေးကြတယ်နော် အပြင်မှာပဲစာရွက်လှလေးတွေနဲ့ရေးတာငြီးငွေ့မှာစိုးလို့
ကဗျာလေးက ထက်ထက် အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း Online မင်းသား http://junekoko.blogspot.com/ ကစပ်ပေးထားတာပါ အဲလိုလေးပေါ့နော်။ စာလုံးလေးတွေကိုအလှပုံဖော်နိုင်အောင်လိုချင်တဲ့သူများအောက်မှာ ကူးသွားလိုက်နော်
တင်သွင်းသူ online မင်းသား at 03:38 No comments:
Mouse မသုံးပဲ ကိုယ့်မျက်လုံးလေး သုံးပြီး Mouse poi...
မလိုချင်တဲ့ ဆော့လ်ဝဲတွေကို ကိုယ့်စက်ထဲမှာ install ...
Shutdown,Restart တို့ကို Shortcut တွေအဖြစ် Deskto...
Desktop ပေါ်မှာ ipad လို သုံးကြည့်ရအောင်.
ဖုန်းထဲမှာ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ အဘိဓာန်ထည့်ချင်ရင်
VZO,Gtalk တွေကို တပြိုင်နက် နှစ်ခုဖွင့်ချင်ရင်
facebook မှာ smile ပုံလေးတွေ သုံးပြီးချက်ချင်ရင်
ကိုယ်သိချင်တဲ့သူရဲ. လိပ်စာ IP ကိုသိချင်ရင်
wireless security auditor v-40
idle လုပ်ပြီး လိမ်မယ်
ဂန္တ၀င်မြောက် A to Z ရည်းစားစာ